Tuesday July 17, 2018 - 11:50:28 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Eng Cabdiraxmaan Cismaan Cumar Yariisoow, waa mayorka magaalada Muqdisho, tan iyo bishii Koobaad ee sannadkan, ha yeeshee wax waxyaabaha ay ku dhaliilaan dadka siyaasadda ka falanqooda waxaa kamid ah shakhsiyaddiisa barafka ah ee qaboow iyo sida uu ula jaanqaadi karo siyaasadda.
Haddaba waxa aan idin soo gudbineynaa saddex sifo oo uu leeyahay taas oo ku dareysa liiska hoggaamiyayaasha iyo siyaasiyiinta fashilmay.
1: Doorkiisa Siyaasadda:- cidna shaki uguma jirto in uu yahay qof shakhsi ahaan qaboow oo doorkiisa siyaasadeed iyo tan reerka uu ku matalo kursiga uu ku fadhiyo uu gabay, sidaa darteeda siyaasiyiinta fashilma waxa ay leeyihiin sifada ah in ay lumiyaan kayaankooda iyo jiritaankooda siyaasadeed.
2: Go’aamada Liita:- Siyaasiga saxda ah waa kan qaata go’aamada saxda ah, tusaalle Thaabbit Cabdi Max’ed wuxuu ku waayay booskiisa go’aanka saxda ee uu qaatay, taas oo ku dareysa in uu weli rejo ka leeyahay siyaasadda dalka, caksiga Yariisoow middaas waa uu ku dhacay oo kama soo dhalaallin doorkaas.
3:Jidbada iyo Guulwadeynta:- siyaasiga guuleysta waa kan ku socda aragtidiisa saxda ah, ee aan ku socon aragtida iyo fekerka qof kale, sidaa darteeda Yariisoow oo ay keeneen nidaamka hadda jira ayaa u muuqda qof u jidbeynaya islamarkaana u guulwadeynaya kooxda siyaasadeed ee hadda dalka heysata.
F.G:- Qormadan looguma tala gelin in qof lagu maago, ee waa muujinta in uu doorkiisa gabay siyaasiga iyo shakhsiga ay taabaneyso.